'SIMP BEHAVIOR' သည်အမျိုးသမီးများကိုကောင်းစွာဆက်ဆံသောယောက်ျားများကိုအရှက်ရစေသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် - သတင်း
Simp ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သူတစ် ဦး အတွက်လမ်းအများကြီးလုပ်ပေးသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ဒါကမြို့ပြအဘိဓာန်ထိပ်တန်းချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ပါပဲ။ ဒါဟာကျား, မသတ်မှတ်ဘယ်တော့မှ, ဒါပေမယ့်လူတိုင်း simp ယောက်ျားဖော်ပြရန်သီးသန့်အသုံးပြုသည်ကိုသိနှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်ယောက်ျား၏အပြုအမူ။
ဒီဝေါဟာရကိုရယ်စရာကောင်းပြီးတစ်ခါတစ်ရံအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အကြားအနည်းဆုံးလေးစားမှုကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသည်။ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုသူမလုံခြုံမှုရှိစေရန် Uber အိမ်ကိုဝယ်လိုက်သည်။ ဒါက simp အပြုအမူပါပဲ။ သူကသူမကိုပထမ ဦး ဆုံးမက်ဆေ့ခ်ျပို့လား။ သူကသူ့အဘို့ simping ပါတယ်။ သူကသူ့ရည်းစားသို့မဟုတ်သူနှင့်အတူအိပ်ပျော်နေသောမိန်းမ၏အလွန်မြင့်မားပြော၏? သူကထိုကဲ့သို့သော simp ပါပဲ။ အမျိုးသမီးများသည်ယောက်ျားများအတွက်ဘားသည်အလွန်ပင်နိမ့်ကျသည်ကိုသိကြသော်လည်းငရဲတွင်စာသားအနေဖြင့်ရှိကြသည်။ သို့သော်ယခုပင်ဘားသည်စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ပြီး၎င်းတို့အားရိုးရှင်းသောအပြုအမူအတွက်၎င်းတို့၏အိမ်ထောင်ဖက်များထံမှထွက်လာလိမ့်မည်ဟုကြောက်ရွံ့သောသူများကစမ်းသပ်နေကြသည်။
အမှန်တရားကတော့လူတွေကို၊ လူတွေအပေါ် simp ကိုသုံးတာကဟာသတစ်ခုလိုမျိုးပဲ misogyny နဲ့ချိတ်ထားတယ်။ Simp ဒါလိင်တူချစ်သူရဲ့ 2020 ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ pussy မဖြစ်ယနေ့၏ဗားရှင်းပါပဲ။
- Gitz - The Car Plug (@Gitz__) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၁၃ ရက်
simp ဟူသောဝေါဟာရနှင့် ပတ်သက်၍ ပြနာသည်အမြီးအမောက်အုံကြွမှုထဲသို့ပြောင်းသွားခြင်းဖြစ်သည်။ အခုဖတ်နေနှင့်ငါ့အ sensitivity ကိုမှာ prickling သူမည်သူမဆို, စကားလုံးတစ်ခု၏မထင်မှတ်အသုံးပြုမှုပင်အလေးချိန်သယ်ဆောင်သည်ဟုစဉ်းစားပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်မယောက်ျားသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်သောဟယ်ရီကသူနှင့်သူ့ယောက်ျားကြင်ဖော်များသည် simp ကိုဟာသတစ်ခုတည်းအဖြစ်သာသုံးသည်။ သို့သော်သင်ကဤအရာကိုလေ့လာကြည့်ပါက၎င်းသည်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်ကိုသူသိသည်။
သူက The Tab ကိုပြောတယ်။ ငါသုံးခဲ့တယ်။ အဲဒါကိုငါခေါ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ရဲ့ယောက်ျားလေးတွေစကားပြောတာမှာရယ်စရာပဲ။ ယောက်ျားလေးများသူတို့ Ollie သူမက်ဆေ့ခ်ျကိုသူမ၏ပထမ ဦး ဆုံးလျှင်ငါ '' အဲလာဘို့ simping တယ် '' ပြောလိမ့်မယ်လိုပဲသူတို့ကမိန်းကလေးတစ် ဦး မက်ဆေ့ခ်ျကိုလိုခငျြသောပြောနေကြသောအခါမကြာခဏပါပဲ ငါအသုံးအနှုန်းအလွန်အမင်းအနုတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်မထင်ကြဘူးဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့အုပ်စုအပေါ်မူတည်သည်။ ငါစော်ကားမှု၏ဆုံးရှုံးမှုကိုလုံးလုံးလြားလြားဖော်ပြရန်အသုံးပြုသောအခြားယောက်ျားလေးများနှင့်ကျွန်ုပ်မိ friends ဟာယဖြစ်သည် - သို့သော်စော်ကားမှု၏နည်းလမ်းသာ - သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ချိုမြိန်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပို၍ ပြက်ရယ်ပြုကြသည်။
ငါလူတ ဦး တက္ကစီအိမ်မှာ simping ဖြစ်ပါတယ်မိန်းကလေးတစ် ဦး လာပြီဟုနေကြသည်မယုံနိုင်ပါ
- လေဝိ🇯🇲🇻🇨 (@ MrCampbell98) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၄ ရက်
simp ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနောက်ပြောင်တာကလူတစ်ယောက်ကိုဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာဟယ်ရီကိုမေးခွန်းထုတ်တဲ့အခါသူကမိန်းကလေးတွေအတွက်ချိုမြိန်ခြင်းမှဝေးကွာသွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ အချို့သောအမျိုးသားများသည်ဤကဲ့သို့သောအရာများကြောင့်အတော်လေးနီးကပ်စွာသက်ရောက်နိုင်သည်။ အဲဒီမှာယောက်ျားများအတွက်ဖိအားတွေအများကြီးရှိပြီးသူတို့အဆက်မပြတ်သူတို့မိန်းမတို့ကိုဖြတ်ပြီးလာပုံကိုအကဲဖြတ်ပါတယ် - သူတို့တစ်တွေအချို့သောလမ်းပြုမူရန်ရှိသည်။ Simp လို့ခေါ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေကိုချဉ်းကပ်တဲ့အခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနည်းလာနိုင်တယ်။ ဒါ့အပြင်ကောင်းမွန်တဲ့ယောက်ျားတွေနောက်ဆုံးပြီးအောင်လုပ်တဲ့ပုံစံကိုဒီစကားလုံးကစွဲမြဲထားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ သငျသညျအမြိုးသမီးတရဖို့သို့မဟုတ်ပထမ ဦး ဆုံးအရာအရပျ၌သူမချဉ်းကပ်ရန် prick နည်းနည်းဖြစ်ဖို့ရှိသည်, ထိုမဖြောင့်သည်။
နောက်ထပ်ယောက်ျားလေးတစ် ဦး ဖြစ်တဲ့ဒန်နီက Instagram ကိုသူမလှောင်ပြောင်နေချိန်မှာသူမအစ်ကိုကသူ့ကို Simp လို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ သူကတောင်ပျော့ Boi သို့မဟုတ်တစ်ခုခုဆိုလိုနိုင်တယ်လို့စဉ်းစား, ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာနားမလည်ခဲ့ပါဘူး။ အကယ်၍ soft boi နှင့် simp အကြားခြားနားချက်ကိုသင်မေးခွန်းထုတ်ပါက soft boi ဖြစ်ခြင်းသည်ဘယ်သောအခါမျှဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းသွားခြင်းမရှိကြောင်းသိထားပါ။ ပျော့ပျောင်းသော bois သည်နူးညံ့။ ပျော့ပျောင်းသော bois သည်အေးမြသည်။ ဒါပေမယ့် simp ဖြစ်ခြင်း၏အဘယ်သူမျှမစိတျအပိုငျးမျှော်လင့်ပါတယ်, ကတရာရာခိုင်နှုန်းနိမ့်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်နိမ့်ကျတဲ့အတွက်ယောက်ျားတွေဟာသူတို့ရဲ့အပြုအမူကိုလုံးလုံးပြောင်းလဲစေတယ် လွန်ခဲ့သောဆယ်ရက်ခန့်က ၁၉ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ် ဦး သည်၎င်းတွင်တင်ခဲ့သည် r / relationships.txt သူ၏သူငယ်ချင်းများကအခြားယောက်ျားလေးများကိုလှောင်ပြောင်သဖြင့်သူတို့ကို Simps ဟုခေါ်သောကြောင့်သူမ၏ရည်းစားကသူမ၏လက်ကိုကိုင်ပြီးလူအများရှေ့တွင်ချစ်ခင်တွယ်တာမှုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းတိုင်တန်းခဲ့သည်။ သူမ၏ရည်းစားသူတက်ကြွစွာကရှောင်ရှားရန်သူ၏ရည်းစားရဲ့ခံစားချက်တွေကိုနာကျင်ရဲ့တဲ့ simp ဖြစ်ခြင်း၏အလွန်ကြောက်တယ်။ သူကဒီစကားလုံးတစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ် 21. ပါပဲ။
ဒီအသစ်သောဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုသူတို့ misogynistic မဟုတ်ရုံဘီစီ simp တောင်းဆို - ကြောင်းရုပ်ဆိုးသောလူအပြုအမူပါပဲ
- s 🦋 (@ sp3llas) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၁၁ ရက်
နောက်သူငယ်ချင်းယောက်ျား Laurie ကသဘောတူသည်။ သူကပြောသည်: ငါကတစ် ဦး ချင်းစီကတခြားအကြမ်းဖက်လိမ့်မည်ဟုရေတွက်လျှင်, ငါနုပျိုစဉ်အခါကန်းကျင်မဟုတ်ခဲ့တကယ်ဝမ်းသာတယ်, ငါကလှည့်ပတ်ခဲ့လျှင်
ဒါပေမယ့်လော်ရီအခုကျောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ - အခြားယောက်ျားလေးများမဟုတ်မဆိုလိုပါ။ ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများတွင် TikTok ရှိသည်၊ သူတို့ simp ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုသူတို့သိကြသည်။ ငါတို့ လိုအပ်တယ် ဒါကြောင့်လူငယ်ယောက်ျားပုံဖော်စတင်မယ့်, ထိုသို့ပြီးသားအရွယ်ရောက်ပြီးသူယောက်ျားပုံဖော်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, ကောင်းစွာအမျိုးသမီးကုသယောက်ျားများအားစော်ကားမှုအဖြစ် simp အသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်။ ထို Reddit ပို့စ်တွင်ရည်းစားမှာ ၂၁ နှစ်မဟုတ်သူ ၁၂ ယောက်ဖြစ်သည်။
ငါစကားလုံး simp အပေါ်စစ်ကြေညာမဟုတ်ပါဘူး, ငါကပိတ်ပင်ထားသင့်ကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ငါ misogyny ကူညီဖို့အသုံးပြုခံရပေါ်မှာအချိန်တောင်းဆိုတယ်။ နှစ်ပတ်ချိန်းပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာလူတစ်ယောက်ကသူ့ရည်းစားကိုကားတစ်စီး ၀ ယ်မယ်ဆိုရင်သူကသူဟာ simp တစ်ယောက်ပါ။ သူကသူမရဲ့ Instagram ပို့စ်တိုင်းကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာထောင်ပေါင်းများစွာကိုမှတ်ချက်ပေးခဲ့ရင်? သူထို့နောက် simp နိုင်ပါတယ်။ သူကသူမ၏ပျားရည်ယုန်ခေါ်ဆိုဆိုလိုပါကသူတစ် ဦး simp ပါပဲ။ ဒီအပြုအမူထိပ်ကျော်နှင့်အဆန်းကျော် cringe ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဲဒါကိုစိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ ဤသို့သောအပြုအမူမျိုးအတွက် simp သည်ယောက်ျားတစ် ဦး အားအမျိုးသမီးတစ် ဦး အားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်တူနိုင်သည်။
သို့သော်အခြေခံအဆင့်အနေဖြင့် - အမျိုးသမီးများ - ကြင်နာမှုဖြင့်ပြုမူဆက်ဆံသည့်အပြုအမူအတွက်၊ simp ကိုမသုံးသင့်ပါ။ ငါကလူကိုအလွယ်တကူလူ -to- လူကိုလှောင်ပြောင်များကထိခိုက်နေကြသည်ကိုသင်ပြောပြရန်မလိုအပ်ပါ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းအလုံအလောက်သူတို့ကိုပြီးသားပေးထားသည်, ငါယောက်ျားဆိုးဆိုးရွားရွားအမျိုးသမီးတွေဆကျဆံဖို့နောက်တဖန်ဆင်ခြေမလိုအပ်ပါဘူးကြောင်းကိုသင်ပြောပြရန်မလိုအပ်ပါ။ ဒီတော့ simp ကိုမသုံးတော့ဘဲသူတို့ကိုစူးစမ်းဖို့ misogynist နည်းလမ်းများထပ်မံပေးခြင်းကိုရပ်လိုက်ပါ။ မိန်းမတို့ကိုအုပ်စိုးသောယောက်ျားတို့ကိုချီးမွမ်းကြလော့။ မိန်းမတို့ကိုရိုသေသောသူ၊ ယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုရှေ့ ဦး စွာချဉ်းကပ်ကြလော့။ သူကသင်ထက်ပိုကောင်းတဲ့လူတစ် ဦး ရဲ့သူမည်သူမဆိုများအတွက် simping မဟုတ်ပါဘူး, သူဖြစ်ကောင်းလည်းပိုကောင်းတဲ့ဂိမ်းတယ်ပါတယ်။
• 'simp' ဆိုတာဘာလဲ၊ ငါ့ရည်းစားကဘာလဲ။
• ဤရိုးရှင်းသောစမ်းသပ်မှုကိုပြုလုပ်ပါ။ သင့်အတွက်သင်၏ဆက်ဆံရေးကိုကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်ပါမည်
•ထုတ်ဖော်: သင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်သောကြောင့်သင်လျော့နည်းရိုးရှင်းစွာပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာဒီဂရီ